China Precision milling muchina zvikamu kugadzirisa vagadziri uye vatengesi | Lingjun
Muchina wekugaya unonyanya kureva chishandiso chemuchina chinogadzirisa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzebasa rine chigayo chekucheka. Kazhinji, chigayo chekucheka chinonyanya kutenderera, uye kufamba kwechigayo uye chekucheka chiri mukudya. Inogona kugadzirisa ndege, groove, zvakare inogona kugadzirisa marudzi ese enzvimbo yakakombama, giya uye zvichingodaro.
Muchina wekugaya imhando yemuchina wekushandisa wekugaya workpiece ine milling cutter. Kuwedzera kune ndege yekugaya, groove, mazino egiya, shinda uye spline shaft, muchina wekugaya unogona zvakare kugadzirisa yakanyanya kuoma nzvimbo nepamusoro-soro kugona kupfuura planer, iyo inoshandiswa zvakanyanya mudhipatimendi rekugadzira nekugadzirisa.
Muchina wekugaya imhando yemuchina unoshandiswa zvakanyanya, unogona kugadzira ndege (yakatwasuka ndege, yakatwasuka ndege), groove (kiyi, T-shaped groove, dovetail groove, nezvimwewo), magiya magiya (giya, spline shaft, sprocket), spiral surface (shinda, spiral groove) nenzvimbo dzakasiyana dzakakombama. Mukuwedzera, inogona kushandiswawo kugadzira pamusoro uye mukati megomba remuviri unotenderera uye kucheka. Kana muchina wekugaya uri kushanda, iyo workpiece inoiswa pane yekushanda kana indexing musoro uye zvimwe zvishongedzo, iyo milling cutter inotenderera ndiyo kufamba kukuru, inowedzerwa nekufambisa kwekudya kweiyo worktable kana milling musoro, workpiece inogona kuwana inodiwa yekugadzirisa nzvimbo. . Kugadzirwa kwemuchina wekugaya kwakakwira nekuda kweiyo multi-edge intermittent kucheka. Muchidimbu, muchina wekugaya unogona kushandiswa kugadzira, kuchera uye kufinha.
Nekuvandudzwa kwe CNC tekinoroji, yakashandiswa zvakanyanya muindasitiri yekugadzira michina. Iyo yakakosha tekinoroji yekusimudzira indasitiri yekugadzira machining tekinoroji yekudzora nhamba. Nhamba yekudzora tekinoroji yakavakirwa padhijitari yekudzora tekinoroji yeruzivo rwemagetsi, iyo inogona kunyatso kudzora maitiro ese ekugadzira michina. Nhamba yekudzora tekinoroji ine zvakawanda zvakatanhamara senge otomatiki kudzora, yakaderera mutengo, chaiyo chaiyo, etc. Iri zvakare kukwidziridzwa kwemidziyo yechinyakare, iyo inogona kuchengetedza mutengo, optimize chimiro cheindasitiri, uye kukurudzira kusimudzira kwakanaka kweindasitiri yekugadzira michina.
Kuenzaniswa neyechinyakare kugadzirisa tekinoroji, nhamba yekudzora tekinoroji ine zvakakosha zvakanakira. Chekutanga, kugadzira uye kugadzirisa kwenhamba yekudzora tekinoroji inovandudza kugona kwekugadzira uye kugadzirisa. Pre-programming nekombuta tekinoroji muindasitiri yekugadzira mechanika inogona kuona kutonga kwemuchina wekugadzirisa chirongwa, kubatanidza tekinoroji yekugadzira, uye kuita iko kurongeka kwemakanika ekugadzira kugadzirisa kumusoro. Chechipiri, iyo chaiyo yekutonga kwenhamba yekudzora tekinoroji iri nyore kwazvo, uye kugadzira uye kugadzirisa kunogona kupedzwa maererano nemaitiro akasiyana, izvo zvinoderedza simba remuviri revashandi. Chechitatu, kugadzira chaiko ndiyo mukana wakatanhamara wenhamba yekudzora tekinoroji. Virtual yekugadzira tekinoroji inogona kushandisa ruzivo rweinjiniya tekinoroji uye simulation control kuratidza zvinhu zvakagadzirwa mune chaiyo fomu, iyo inogona kunyatsoona zvigadzirwa mushure mekugadzirwa, izvo zvinobatsira kune zvitsva zvigadzirwa. , Kuvandudza kukwikwidza kwemusika kwemabhizinesi.
1. Kushandisa mumuchina wekushandisa mudziyo
Maturusi emuchina anoita basa rakakosha muindasitiri yese yekugadzira michina. Nhamba yekudzora tekinoroji, inosanganisira tekinoroji yemazuva ano senge komputa tekinoroji, magetsi otomatiki, uye zvemagetsi ruzivo tekinoroji, inogona kuiswa kune akasiyana maturusi emuchina kuti aone mechatronics eakasiyana maturusi emuchina. . Iko kushandiswa kwenhamba yekudzora tekinoroji mumuchina wekushandisa mudziyo haungogamuchire echinyakare muchina wekugadzira dhizaini, asi zvakare unovandudza kuchinjika kwechishandiso chemuchina wemuchina uye kunosimbisa huchokwadi uye kugadzikana. Pamusoro pezvo, tekinoroji yekudzora nhamba ine mukana wakakura mukudzora mutengo uchienzaniswa neyechinyakare muchina maturusi emidziyo. Kune rumwe rutivi, inoderedza mukana wezvigadzirwa zvisina kukwana. Kune rimwe divi, kugona kwekugadzira kwenhamba yekudzora muchina maturusi zvakare inovandudzwa.
2. Kushandisa muindasitiri yemuchadenga
Indasitiri yezvendege chiratidzo chakananga chedanho renyika yangu, nehunyanzvi hwekugadzira hwazvino. Iyo yechinyakare michina yekugadzira nhanho yatadza kuzadzisa zvinodikanwa zveindasitiri yepasirese iri kukura, kunyanya magadzirirwo ekugadzira zvikamu akanyanya kunaka. Naizvozvo, kusimudzira kwenguva refu kweindasitiri yeaerospace inogona chete kuwanikwa nekuvandudza danho rekugadzira michina. Kuenzaniswa neyechinyakare mekinoroji yekugadzira tekinoroji, kushandiswa kwenhamba yekudzora tekinoroji kwakavandudza zvakanyanya kunaka uye kurongeka kwekugadziriswa kwezvikamu. Zvakanakira zvaro senge yakaderera kutema simba uye yakaderera kupisa chizvarwa ndiyo hwaro hwezvikamu kunyatsoita, uye nhamba yekudzora tekinoroji kutonga, kugadzirwa kwechigadzirwa hakusi nyore kukanganisa, Iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvakasimba zveindasitiri yemuchadenga yezvigadzirwa zvemichina.
3. Kushandisa muindasitiri yemotokari
Indasitiri yemotokari ndeimwe yemaindasitiri ekutanga akashandisa tekinoroji yekudzora nhamba. Nekuenderera mberi kwekuvandudza tekinoroji yemotokari uye mabasa, indasitiri yemotokari yakawedzerawo zvinodiwa pakugadzira michina. indasitiri yemotokari yenyika yangu iri kusimukira nekukurumidza, uye kugadzira mota kwave kugadzira otomatiki pasi pekurudziro yetekinoroji yekudzora nhamba, iyo yakadzivirira kutsika nemaoko uye welding. Iko kushandiswa kwenhamba yekudzora tekinoroji kunogona kuona kutarisisa kwemaitiro ekugadzira kuburikidza nenhamba yekudzora sisitimu, kuderedza kutsamira kweiyo mota yekugadzira maitiro pabasa, uye kuwana kukura kwakakura mukubudirira kwekugadzira uye mhando yekugadzira yezvikamu.
CNC machining tekinoroji tekinoroji yakazara, iyo yakaita basa rinowedzera kukosha mukugadzira michina. Nhamba yekudzora tekinoroji inopa yakakosha chikamu chemhando yekugadzira michina, kushanda nesimba uye kudzora mutengo, uye inogadzirisa matambudziko mazhinji ehunyanzvi muindasitiri yekugadzira michina. Kune zvikamu zvine zvemhando yepamusoro zvinodiwa, CNC tekinoroji inovhura kuti isangane nezvinodiwa zvekugadzira. nyika yangu iri munguva yakaoma yekusimudzira magariro nehupfumi, kunyanya pasi pekukanganisa kwehupfumi. Chete nekuenderera mberi nekuvandudza mwero weCNC tekinoroji uye kuenderana nenguva kweCNC tekinoroji application inogona kuenderana nenyika uye kusimudzira kwakagadzikana kwenguva refu kweindasitiri yekugadzira michina yenyika.
Imwe: Otomatiki yekugadzira mutsara, 24h kugadzirwa, 24h yemhando yekuongorora
Zviviri: Mhando dzese dzehunyanzvi hwekuyedza michina uye yakanakisa mhando yekuongorora matekiniki
Tatu: ISO9001 yepasirese yemhando system certification uye ISO13485 yekurapa system certification
Chechina: Nyanzvi mushure mekutengesa-sevhisi, rega iwe ushandise zvakanyanya kuvimbiswa
Zvakapfuura: Precision CNC machining zvikamu
Zvinotevera: Precision zvikamu zvekugadzirisa
Cnc Milling Machine Zvikamu
Cnc Milling Machine Zvikamu Supplier
Cnc Milling Machined Zvikamu
Milling muchina zvikamu kugadzirisa customization